Ukulungisela isehlo esingenakuvinjwa kuza kuqala ezikhathini ezinzima | News24
Ukulungisela isehlo esingenakuvinjwa kuza kuqala ezikhathini ezinzima
“IKHAVA yomngcwabo iwumshuwalense ofunwa kakhulu kuleli zwe. Ukufa kusalokhu kuyingxenye engenakuvinjelwa yohambo lomuntu, ukwenza ikhava yomshuwalense kuyisidingo.” kusho uSandile Xolo, uMphathi Wezokukhangisa Nokuxhumana e-Ithala SOC Ltd.
Njengoba amakhasimende aseNingizimu afrika engaphansi kwengcindezi enkulu ezikhathini ezinzima ngokwezomnotho, ikhava yomngcwabo iyindlela ephumelela kakhulu yokulungiselela isenzakalo esingenakuvinjelwa nokuqinisekisa ukuthola kwengqondo.
Kunabahlinzeki bomshuwalense womngcwabo abasemthethweni abangaphezu kuka-50 eNingizimu Afrika futhi le mboni ikhulu ngokushesha unyaka nonyaka. Ingqungquthela ye-Funeral Indaba yango-2017 yathola ukuthi imboni Ibiza phakathi kuka-R7-10 billion.
Nakuba iningi lomasncwabisane lingabizi kakhulu, ukugcwala kwabahlinzeki kwenza kuphoqeleke ukuba amakhasimende akhethe ikhava yomshuwalense ezohlangabezana nezidingo zawo kangcono kakhulu.
I-Consumer Protection Services ithola izikhalazo eziningi kakhulu zikhala ngabahlinzeki bomshuwalense womngcwabo abahlukahlukene abavelele ezivela kumakhasimende angenelisekile.
“Izikhalazo ezivame kakhulu esizitholayo ziphathelene nabathengi abangayitholi imali esandleni lapho sebeyidinga; amapholisi akhokha imali encane kakhulu kunaleyo eyayithenjisiwe; namapolicy angakhokhi nhlobo,” kusho uTereza Naude, uMqondisi Ongumsizi e-Consumer Protection Services.
Umhlinzeki wamasevisi ezimali, Ithala SOC Ltd, ugcizelela ukubaluleka kokuthumela wonke amadokhumenti adingekayo lapho kufakwa isicelo sokukhokhwa kwemali ngoba ukwehluleka ukwenza lokho kuzokwenza ukuba inqubo yokukhokha ime ekugcineni okuba nomthelela emalini ekhokhwayo.
“Isikhathi sokusebenza ngesicelo sokukhokhwa kwemali singaba sincane kangangamahora angu-48 kodwa sixhomeke ekutheni ikhasimende lisihlinzeke ngawo wonke amadokhumenti adingekayo.
Ukufaka isicelo sokukhokhwa kwemali kufanele kube lula kangangokunokwenzeka futhi empeleni kudinga nje ukuba ikhasimende liye kwelinye lamagatsha ethu liyosifaka khona,” kusho uXolo.
“Lapho ukhetha uhlelo lomngcwabo, nansi imibuzo ebaluleke kakhulu okumelwe uzibuze yona:
* Ufuna ukuba ipholisi ikhave bani?
* Yiziphi izindleko ongathanda ukuba umshuwalense uzikhave, njengokudla netshe lesikhumbuzo?
* Malini ongakwazi ukuyikhokha njalo ngenyanga?
* Ukufa kwelungu elithile elikhaviwe kungaba namuphi umthelela emndenini?”
UXolo unezele ngokuthi lokhu kuyosiza ekunqumeni isidingo sokusebenzisa ezinye izinzuzo zepholisi ngokwelulekwa.
“Ukwehla kwamandla emali nako kunomthelela omkhulu emalini ekhokhwa nyanga zonke,” esho.
Njengamanje izindleko zomngcwabo zingaba noma kuphi phakathi kuka-R15 000 no-R200 000, okuyimali imindeni eminingi ehlulekayo ukuyifinyelela uma othandekayo wayo efa ngokuzuma.
“Lapho umndeni uzama ukujwayela ukuphila engasekho othandekayo, into okumelwe ungakhathazeki nhlobo ngayo yindlela abazoqhubeka bephila ngayo ngokwezimali.
Ungathatha inzuzo ezokhokhela umndeni wakho imali nyanga zonke isikhathi esingangezinyanga ezingu-12. Ngokuvamile le mali oyikhokha nyanga zonke ayinkulu, kuxhomeke ekutheni malini umndeni wakho ozoyithola nyanga zonke.”
Amagatsha angu-39 ase-KZN anezikhungo ongazivakashela kalula.
Imikhiqizo ehlinzekwa yi-Ithala SOC Limited ihlanganisa imikhiqizo ehlukahlukene ebalulekile yokonga nokutshala izimali, ukubhenka kwezinkampani, ukulondoloza kwabantu, ukuthenga izindlu, umshuwalense nokuboleka imali.
“Isikhathi sokusebenza ngesicelo sokukhokhwa kwemali singaba sincane kangangamahora angu-48 kodwa sixhomeke ekutheni ikhasimende lisihlinzeke ngawo wonke amadokhumenti adingekayo. Ukufaka isicelo sokukhokhwa kwemali kufanele kube lula kangangokunokwenzeka futhi empeleni kudinga nje ukuba ikhasimende liye kwelinye lamagatsha ethu liyosifaka khona,